About Us - Hebei Izindwangu Imp & Exp.. Co., Ltd.
Hebei Izindwangu esungulwe ngo-1974, elise Shijiazhuang Idolobha, Isifundazwe Hebei.
"Ubumbano, ukukhuthala, ukusebenziseka nokuzinikela" bekulokhu umoya wethu ibhizinisi selokhu yasungulwa. Siphumelele isikali nokuthuthukiswa okusheshayo ngokusebenza kanzima nangesibusiso umzamo ukuphayona. Inkampani yethu eseke idumela elihle ekhaya aphesheya. singamakhosi ibhizinisi eqinisekisiwe ISO 9001, ngokwezifiso Aeo Senior ibhizinisi isitifiketi. Ngaphandle kwalokho, thina nakho AA Ikhasimende Sinosure futhi isaphulelo sentela ukuthekelisa A grade amabhizinisi.
Inkampani yethu uzibophezele ekuhlinzekeni uhla egcwele izinga okusezingeni nezinsiza ephumelelayo futhi nemikhiqizo high, ukukhonza abathengi kanye nabathengisi emhlabeni wonke. Ngemva kweminyaka engu-40 ukuthuthukiswa okuqhubekayo, kancane kancane kwakheka iqembu ukuthekelisa phezulu nge ocebile yokuthengisa isipiliyoni kanye namakhono zokusebenza, imikhiqizo abathintekayo emazweni amaningi futhi izifunda ezifana eYurophu, eMelika, e-Asia, e-Afrika nase-Australia. Yonyaka kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle umthamo yenkampani amatekisi phezulu 30 eSifundazweni Hebei. Inkampani yethu wonyaka kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle nomthamo 2017 lalingaphezu kwezigidi 100 aseMelika.
Uchungechunge imikhiqizo glycine eziqhutshwa inkampani yethu, sithembele base ngobukhulu ukukhiqizwa glycine emhlabeni - Isifundazwe Hebei, China lapho siye wakha ubambiswano ekahle kakhulu nge emikhulu imboni yayo. Futhi ngesisekelo izinzuzo aphelele, sikunikeza play okugcwele izinzuzo zethu abafanele. Imikhiqizo eyinhloko esikhathazeka ngayo Glycine, Glycine chelate, ushintsho Pharmaceutical nezinye acid acid. Thina ngenkuthalo ukuhlola ezimakethe zomhlaba jikelele futhi ukukhonza abasebenzisi global nge high, imikhiqizo esitebeleni namanani ukuncintisana.
Izidingo ikhasimende kukhona amazinga ethu emsebenzini, nokwaneliseka kwamakhasimende umsebenzi wethu target. Sizimisele ukusungula wokwethembana bazuze ubuhlobo wokubambisana nawe isikhathi eside futhi connive a luhlelo lwekutfutfukiswa ndawonye.